Baarlamaanada Soomaaliya & Sudan oo heshiis wada Saxiixday iyo Wafdiga Baarlamaanka oo Khartoum kasoo amba baxay – idalenews.com
Baarlamaanada Soomaaliya & Sudan oo heshiis wada Saxiixday iyo Wafdiga Baarlamaanka oo Khartoum kasoo amba baxay
heshiiskan ay wada saxiixdeen Baarlamaanada wadamada Soomaaliya iyo Sudan ayaa waxa ay ka wada Shaqeeyay in la galo hishiiskan Gudoomiye ku xigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo dhiggiisa Dalka Sudan Mudane Haji Ibna Siid.
Heshiiskan hor dhaca ah oo inta ay wada saxiixin labada Gudoomiye ku xigeen, ayaa waxa ay ka wada hadleen qodobo muhiim ah oo quseeya arinta Xaaladda Ardayda Soomaaliyeed ee Dalka Sudan kuwooda Doonaya in ay waxbarasho kasii wadaan Dalka Sudan iyo Sidoo kale in laga wada shaqeeyo xariir dhawna ka yeeshaan Baarlamaanada Sudan iyo Soomaaliya arimaha Shirka Baarlamaanada heerarkiisa kala duwan.
Gudoomiye Kuxigenka 1-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya Jaylaani Nuur iikar ayaa ku booriyay Baarlamaanka Dowladda Sudan oo ku jira Gudiga Fulinta ee Baarlamaanada Wadamada Islaamka ah in ay si hoose ula socdaan Qodobadii Soomaaliya Quseeyay ee shirkii Baarlamaanada wadamada Islaamka ah kasoobaxay, ayna ku dadaalaan Fulinta Qodobadaas maadaama Soomaaliya iyo Sudan ay Si gaar ah isugu dhawyihiin.
ka hor inta aan qodobada ay ku wada hishiiyeen la saxiixin ayaa waxa Saxaafada u aqriyay Xoghaynta Gudoomiyaha Baarlamaanka Sudan waxaana uu yiri”
1- waxa ay muujiyeen laba dhan in ay jirto xariir gaar ah oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Sudan kuna dhisan isku xirnaashaha Diinta mida Taariikhda, mida Geographic ah iyo bini’aadanimada. taasoo ku kulmisa in ay hor mariyaan ayna ku adkeestaan sidii ay iskaashi u samayn lahaayeen dhan walba ah gaar ahaan iskaashiga baarlamaaniga ah.
2- waxa ay ku hishiiyeen laba dhinac baahida loo qabo in ay isku kashadaan ayna isku garabsadaan shirarka caalamiga ah iyo kuwa heerka gobol ah taasoo loo fiirinayo danaha Labada dhinac iyo Maslaxada Caalamka Islaamka ah iyo in ay isdhaafsadaan Khibradaha Labada Baarlamaan taasoo xoojinaysa waxyaabihii ay horay usoo arkeen labada dhinac ayna is dhaafsadaan buugaag tababaro iyo waxii la mid ah.
Qodobadan iyo kuwa kale oo gaaraya ilaa 10 qodob ayeey ka koobnaayeen oo labada dhan isku raaceen in la wada saxiixo.
Sidoo kale Gudoomiye Kuxigeenka 1aad ee baarlamaanka Jaylaani Nuur Iikar waxa uu soo indha indheeyay Hoolka ay ku shiraan baarlamaanka Dowladda Sudan iyo sida ay u shaqeeyaan.
Heshiiskan ayaa waxa goob joog ka ahaa Safiirka Safaaradda Soomaaliya ee Dalka sudan Mudane Maxamed Cabdulaahi Ugaas iyo Uqaybsanayaasha Safaarda waxbarasha iyo ganacsiga Marwo Suusan Xirsi Faarax iyo C/qaadir Guulane iyo Xubno ka Tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid aha wafdigii Baarlamaanka Soomaliya ka socday ee Khartoum Shirkii Baarlamaanada Wadamada Islaanka kaga qayb.
Bahdii caanka ku ahayd Ciyaaraha fudud oo dalka soo gaartey +sawiro
Maamulka G/Sh/Dhexe oo walaac ka muujiyay nolosha Boqolaal Qoys oo ku tabaaleysan Jowhar